We Fight We Win. -- " More than Media ": ကပစ (၉) ၊ ပန်တောင်း၊ ကျောက်ဖြူးမှ စစ်သည်များ နစ်နာနေရခြင်းအကြောင်း
ကပစ (၉) ၊ ပန်တောင်း၊ ကျောက်ဖြူးမှ စစ်သည်များ နစ်နာနေရခြင်းအကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ တပ်တွင် ၂၀၀၈ ခု ဇွန်လမှ စ၍ တပ်သားအဆင့်မှ တပ်ကြပ်အထိ တစ်လလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တပ်ကြပ်အဆင့်မှ အရာခံဗိုလ် အထိ တစ်လလျှင် ၅၀၀၀ ကျပ် ပြည်မြို့အင်းဝဘဏ်တွင် တပ်ရင်းမှုး အမိန့်အရ မစုမနေရ ငွေစုခဲ့ရပါသည်။ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီတွင် ထည့်ရန်ဟု သိရပါသည်။ ယခုအခါ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတွင်လည်း ထိုစုငွေများကို လက်မခံတော့ကြောင်း သိရပါသည်။ ငွေလို၍ မိမိ၏ စုငွေကို ထုတ်ယူလိုလျှင်လည်း စုငွေကို ထုတ်ယူခွင့်မပေးပါ။ တပ်ပြောင်းသည့်အခါနှင့် သက်ဆိုင်သူ ရဲဘော်သေဆုံးလျှင်မှသာ ထုတ်ပေးပြီး မိသားစုအား အပြည့်အ၀ ထုတ်မပေးပါ။ တပ်ရင်း ငွေစာရင်းဌာနတွင် ဒုအရာခံဗိုလ် ဘုန်းကျော်နှင့် ညှိလျှင် စုငွေကို ထုတ်၍ ရနိုင်ပြီး ငွေတစ်သောင်းထုတ်ယူရန် ၎င်းနှင့်အဖွဲ့ကို နှစ်ထောင်ကျပ် ပေးရပါသည်။ ဘဏ်သို့သွားရန် မလိုဘဲ ၎င်းတို့က ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤသို့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲကြပ်တည်းလှသည့် စစ်သည်များမှာ အလွန်နစ်နာနေရပါသောကြောင့် အထက်လူကြီးများ
BIG THIEF is Major thant sin MD of MPPE. his wife Got Australia PR. his old daughter and son in law is australian citizen and his young daughter is australuian PR. But he still in service of burmese government. he isaman whom energy minister most trust. According to government regulation. he can not be MD of MPPE bec his wife and his daughters are citizen. they are so rich. alot of cars and houses are in australia. There is major thant sin son in law facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=595366224&ref=ffa
her email address is gnb4ever@gmail.com ayesumyat.thone88@gmail.com
10 January 2012 at 06:21
10 January 2012 at 06:22